> Resource> iTunes> Olee otú iji Record Pandora ka iTunes
Chọrọ ịzọpụta Pandora ka iTunes maka playback offline mere na ị nwere ike igwu Pandora na iTunes effortlessly dị nnọọ ka play iTunes music? Ma ọ bụ ị na-eme atụmatụ na-ege ntị Pandora music on gị obere Apple ngwaọrụ dị ka iPod, iPhone, na iPad wdg na-atụrụ ndụ na-aga?
Ị bụ onye chioma nkịta. Ebe a, m ga-eso ndị kacha na ụzọ kasị mma-enyere gị aka enuba Pandora site iTunes. Na-eche mmasị na ya? All nri, ka nọgide na-.
The usoro m ịmụta bụ iji smart audio-edekọ ihe. M anwa anwa ikwu, sị, Streaming Audio Recorder bụ ihe kasị mma audio edekọ m na mgbe eji. Ọ nwere ike na mfe ibudata Pandora music zuru ezu yiri ozi, dị ka artists, album-ekpuchi ma na aha wdg, na nyefee mbụ-edu Pandora music ka iTunes dị nnọọ na otu-mfe click. Ugbu a, biko soro n'okpuru atọ iji mee Pandora ka iTunes akakabarede.
Download na wụnye Streaming Audio Recorder. Mgbe ahụ, ẹkedori a smart ngwa.
2 Malite idekọ Pandora
Mgbe ị banye isi interface nke Streaming Audio Recorder, pịa "Record" bọtịnụ na n'elu aka ekpe akuku. Open Pandora.com, chọta na-egwu song ị chọrọ ka ịdekọ.
Ọ dị mma. Ị pụrụ ịhụ nke a smart audio edekọ ka malitere idekọ Pandora song. Ka ịkwụsị ndekọ mgbe ebre nke abụ a na-okokụre, ị nwere ike see "Record" button ọzọ.
Cheta na: I nwekwara ike ịtọ elekere nyere site a na ngwa hazie mmalite-na ndekọ na ọgwụgwụ-ndekọ oge ka ​​ọ na-akpaghị aka mechie mgbe na ndekọ na-eme.
3 Play Pandora on iTunes
Gaa a ngwa si n'ọbá akwụkwọ, họrọ ndị ị chọrọ mbubata, wee see "Tinye ka iTunes" button. Ị ga-ahụ ndị ahụ e dere Pandora songs na-echekwara na playlist aha ya bụ "SAR" na iTunes.
Ugbu a, i nwere ike iji iTunes na-egwu ndị a Pandora songs n'oge ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta ndị a faịlụ ka Apple ngwaọrụ, ị ga-ahụ ọ bụghị onye na-agaghị ekwe omume ihe ọ bụla ọzọ. Na-agbalị nnọọ ya.
Lee video nkuzi n'okpuru: